AP7 Såfa iyo sanduuqyada kaydka dowladda | Pensionsmyndigheten
AP7 Såfa iyo sanduuqyada kaydka dowladda
Haddii aadan dooneyn inaa isku mashquuliso lacagta hawlgabka waxaa dalbankartaa sanduuqa AP7 Såfa oo ku waafajinaayo halista adiga da’daada, ama sanduuqyada dowladda midkood, oo halistooda yar tahay intaa lacagta laguu keedinaayo oo dhan.
AP7 Såfa - habka qaranka ee maaraynta da’da lagu jaangooyeyAP7 Såfa waxaa loogu talagalay qofka doonaya kaydin khidmad yar oo aad u baahnayn iyo dooneyn in aad iskugu hawliso keeydinta. Waxaa loogu talagalay gebi ahaan kaydkaaga oo dhan iyo sidaas awgeedna kuma dhexwadi kartid sanduuqyo kayd oo kale. Lacagtaada hawlgabka waxaa laguugu kaydinayaa AP7 Såfa haddii aadan dooraan sanduuqyo kale. Adiga waqtigaa rabtid baa doorankartaa ama iska badalikartaa sanduuqa AP7 Såfa.
Sanduuqyada kaydka dowladda oo leh heerar khatar oo kala duwan
Saddexda sanduuq ee dowladda oo diyaarka ah waxaa loogu talagalay qofka doonaya in uu doorto heerka khatarta kaydkiisa, laakiin aan doonayn in uu samaysto sanduuq u gaar ah. Sanduuqyada kaydka dowladda lagu ma dhexwadi karo sanduuqyo kale.